अनुहारमा चोटपटकको दाग धब्बा हटाउन चाहानुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् रहनेछैन केही निशान – Daily NpNews
टिकटकमा दिदी-बहिनी झगडा गरेर भाईरल बिनु अधिकारी गायिका बन्दै । शिशिर भण्डारीसँग गीत गाउने पक्का (भिडियो हेर्नुस)
गरगहना र धनसम्पत्ती बोकेर घर छाडेकी पत्निको बाटो हेर्दै क्षेत्र
बिहे गरेको ३३ वर्षपछि जुम्ल्याहा दाजुबहिनी भएको थाहा पाएपछि
कपाल झरेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस् यी ९ समस्याले ग्रसित भएमा झर्ने गर्छ कपाल
अभिनेत्री श्वेता खड्काको (विवाह कार्ड सहित)
प्रधानमन्त्रीलाई गगन थापाको चे’तावनी : पौडेलको गि’रफ्तारी तपाईँका लागि निकै महँगो पर्नेछ
आफ्नै श्रीमतीको अर्कै केटासंग मो’जमस्ती, मोबाइलमा भेटिए यस्ता अ’श्लिल भिडियो, भिडियो र फोटो देखाउदै प्रमाणसहित आए श्रीमान
नायिका श्वेता खड्काले मंसिर २२ गते धनगढीका विजयेन्द्र सिंह राउतसँग बिहे गर्ने पक्का
मुख्य पृष्ठ /रोचक/अनुहारमा चोटपटकको दाग धब्बा हटाउन चाहानुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् रहनेछैन केही निशान
अनुहारमा चोटपटकको दाग धब्बा हटाउन चाहानुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् रहनेछैन केही निशान
काठमाडौँ । तपाईको छालामा घाउ एक साधारण चीज हो। यदि घरमा बच्चाहरू छन् भने तिनीहरूलाई प्रायः चोट लाग्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको चोटपटक जतिसक्दो चाँडो निको पार्ने तपाईंको जिम्मेवारी हो। प्रायः घाउलाई खुला छोड्नु ठीक हुँदैन, यसले संक्रमणको सम्भावना बढाउँदछ। के तपाईंलाई थाहा छ घाउ निको पार्ने घरेलु उपचारहरू तपाईंको भान्छामा अवस्थित छ।
अबदेखि, यदि बच्चाहरूलाई चोट लाग्यो भने, त्यसोभए तपाईं कुनै पनि डाक्टरको अगाडि जानु पर्दैन। तपाईको बच्चाहरूको चोटहरू तपाईको भान्छामा उपलब्ध सामग्रीले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामीसँगै केही घरेलु उपचारहरू पत्ता लगाऔ जसको मद्दतले हामी घरैमा बसि हाम्रो घाउहरू निको पार्न सक्दछौं।
एलोवेरा: एलोवेरा यस्तो प्राकृतिक औषधि हो जुन गुणहरूको भण्डार हो। हामी छालामा चोटपटकमा एलोवेरा प्रयोग गर्न सक्छौं। एलोवेरा घाउ निको पार्ने एक महत्त्वपूर्ण औषधी हो।बेसार: बेसारले तपाईको घाउ मात्र चाँडै निको पार्दैन तर उत्कृष्ट एन्टिसेप्टिकको रूपमा पनि काम गर्दछ। जब तपाईं काटिएको ठाउँमा बेसार लगाउनुहुन्छ तपाईंको घाउ चाँडै निको हुँदैन, तर संक्रमण रोक्नको लागि बेसार राम्रो औषधी हो।
मह: मह घाउहरूलाई निको पार्न एक उत्तम औषधी हो। जब तपाईलाई चोट लाग्छ, चोटलाई सफा पानीले धोई महको पेस्ट प्रयोग गर्नुहोस्। महले चोटपटकको कारण सुनिएको घाउँलाई कम गर्दछ।
भिनेगर: चोटमा सिरका प्रयोग गर्दा केही दुख्ने हुन्छ, तर चाँडै यसले तपाईंको घाउलाई निको पार्छ। कपासमा दुई थोपा सिरका राखेर घाउको ठाउँमा लगाएमा घाउ चाँडै निको हुनेछ।
टि ब्याग: अक्सर व्यक्तिहरूले चिया पिइसके पछि टि ब्याग फ्याँक्छन् तर के तपाईंलाई थाहा छ यो तपाईंको घाउँहरूलाई निको पार्न एक महत्त्वपूर्ण औषधी हुन सक्छ। यदि तपाईंको घाउमा रक्तस्राव भइरहेको छ भने, एक टि ब्याग प्रयोग गर्दा घाउ चाँडै निको हुनेछ।
होटलमा रा’त का’ट्न आ’फ्नै दिदी आ’एपछि…
धनी हुन दिँदैन यस्तो बानीले जतिसक्दो छिटो छाड्नुहोस
स्याङ्जाका एक व्यक्तिको घरमा खानतलासी गर्दा प्रहरीले जे भेट्यो, एकजना पक्राउ
जाडोमा यसकारण सुनिने गर्छन् हामी सबैका हातखुट्टा, यस्ता छन् सजिला बच्ने उपाय
विवाह भन्दा पहिला पार्टनरसँग अवश्य सोध्नुस् यी तीन प्रश्न